(40*60) ft – Nay Chi & Lamin Myanmar Real Estate
(40*60) ft properties
9 Mile, Mayangone, Yangon. Lakhs 10.00
9 Mile, Mayangone, Yangon.
လုံးခြင်း Rc နှစ်ထပ်ခွဲအိမ်နှင့်ခြံ ငှားမည်။ ၉ မိုင် ဦးမောင်မောင်စိုးလမ်းသွယ် ၄၀×၆၀ RC နှစ်ထပ်ခွဲတိုက် 4. Master Bed rooms6Aircons Teak parquet floor 10 Lakhs per month Please Contact, Naychi Lamin Real Estate 09795727121, 09794390261 Viber: 09443139801 www.myanmar-realestate.com
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)။ ရန်ကုန်။ Lakhs 4,700.00
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်လုံးချင်းအိမ်သစ်အရောင်း ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၃၇ ရပ်ကွက် နေရာကောင်း လမ်းသန့် ပင်လုံလမ်းမကြီးအနီး မြေအကျယ် ၄၀×၆၀’ ပေ အိမ်အကျယ် ၃၃×၄၅’ ပေ မြေအမျိုးအစား – ဂရန်မြေ SPယူထားသည် မြေပုံ- မြေရာဇဝင်ကူးပြီး2RC အောက်ထပ် 1Master Bedroom ဧည့်ခန်း ထမင်းစားခန်း မီးဖိုချောင် စတိုခန်း အပေါ်ထပ်3Master Bedrooms ဘုရားခန်း ဝရန်တာပါ Aircom 6လုံးတပ်ဆင်ပြီ အသင့်နေ လုံးချင်းတိုက်အသစ်စစ်စစ်ပါ အရှေ့အလှည့်လေးပါခင်ဗျာ့.. ရောင်းဈေး- သိန်း၄၇၀၀ ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09795727121, 09794390261 Viber: 09443139801 www.myanmar-realestate.com
ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)။ ရန်ကုန်။ Lakhs 4,900.00
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ့… လုံးချင်းအိမ်အသစ်စစ်စစ်လေးတစ်လုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ . ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၃၅ ရပ်ကွက် ​ မြေအကျယ် ၄၀×၆၀’ပေ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်အကျယ်အဝန်းကတော့ ၃၄×၄၅’ပေ ဂရန်အမည်ပေါက်2RC အောက်ထပ် 1 Master Bedroom ဧည့်ခန်း ထမင်းစားခန်း မီးဖိုချောင် အပေါ်ထပ် 3Master Bedrooms 1 Single Bedroom ဘုရားခန်း ဝရန်တာလေးနဲ့ ရပ်ကွက်ကောင်း လမ်းသန့် ပင်လုံလမ်းမကြီးနှင့်လည်းနီးပါတယ်ခင်ဗျာ့ ရောင်း- ၄၉၀၀ သိန်း (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန် နေခြည် လမင်း အိမ်ခြံမြေ 09795727121, 09794390261 Viber: 09443139801 www.myanmar-realestate.com
2400 sq ft5beds4baths
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ အရှေ့ဒဂုံ ရန်ကုန်။ Lakhs 1,600.00
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ အရှေ့ဒဂုံ ရန်ကုန်။
အိမ်နှင့်ခြံရောင်းမည်။ (4)ရပ်ကွက်, အရှေ့ဒဂုံ ။ ကားမှတ်တိုင်နီး၊ စျေးနီး။ မြေအမျိုးအစား-ပါမစ်မြေ မြေအကျယ်- (40’×60′ ) ft သိန်း 1600/ (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801